Maitiro ekurodha mumhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo | Kubva kuLinux
Maitiro ekurodha mumhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo
Kana iwe uri mudiwa wemimhanzi, iwe pamwe wakatarisa pane imwe nzira yeimwe nzira yekurodha mimhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo. Isu tinokupa iwe inoshanda inoshanda sedumwa.
Kana iwe uchida kuteerera mimhanzi paYouTube kana Vimeo, asi iwe uchida kuzviita pasina kana pane chako chinotakurika mutambi, chishandiso ichi chinogona kunge chiri chekufarira. Kangani isu tanga tichida kuteerera kurira kweimwe bhaisikopo uye nekugona kuichengeta mune raibhurari yedu yemimhanzi?
1 Youtube kune mp3
2 Chinyorwa chakareruka
Youtube kune mp3
MediaHuman YouTube kune MP3 Converter ndiyo sarudzo yakanakisa yevanoshandisa Ubuntu. Iyi software inoyevedza iri nyore kwazvo kushandisa uye inobvumidza iwe kuti uburitse maturu edhiyo kubva kuYouTube mavhidhiyo uye YouTube playlists mune yepamusoro-soro mhando.
Kuiswa en Ubuntu 12.04 uye unotevera:
sudo apt-tora kuisa youtube-kune-mp3
Ivo vanoshandisa vakareruka distros zvirokwazvo vanosarudza rubatsiro rwechinyorwa kuti vaite iri basa rakanaka.
MuArch uye zvigadzirwa, zvinokwanisika kurodha pasi youtube2mp3 o youtube-zenity kubva kuAUR. Iko kushandiswa kuri nyore-nyore, kana yaiswa chete, ingo mhanyisa script iine zita rimwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekurodha mumhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo
Duván Ballen Rodríguez akadaro
Haisi pakati penzvimbo dzeUbuntu 13.04… 🙁.
Pindura Duván Ballén Rodríguez
Zvakanaka unogona kurodha mimhanzi uye zvakare mavhidhiyo kubva kuYouTube uye mamwe mawebhusaiti pasina zvirongwa zviri nyore .. vhura vhidhiyo uye mu URL pamberi peshoko youtube wedzera »DL» wobva wasarudza mp3 kana vhidhiyo uye kurodha pasi
Pane imwe nzira inoita senge iri nyore kwandiri, vhura iyo youtube vhidhiyo iwe yaunoda kurodha pasi uye wedzera »dl» pamberi peiyo youtube URL uye iwe uchaona sarudzo yekusarudza mhando yekurodha, iwe zvakare uchave nesarudzo yekurodha pasi mp3 odhiyo 😉
NaJdowloader zvinogona zvakare kuitwa, chakashata ndechekuti muvhidhiyo inoderedza vhoriyamu. Iva kana ichishanda seizvi
Chimwe chinhu, kubatsira vashandisi vevashandi, zvingave zvinobatsira kana ukapa apt: youtube-to-mp3 sey link yekuisa chirongwa ichi. Ivo vanovenga iyo yekupedzisira uye ivo vari iro ramangwana
clipgrab inoita kunge iri nyore, hazvidiwe kuti uise chinongedzo nekungotsvaga nemusoro wenyaya waunokwanisa
Inondiudza (na12.04) kuti "iyo YouTube-kune-mp3 package haina kugona kuwanikwa"
Octavio Ortega akadaro
Ini handiise chero chinhu, ini ndinoshandisa webhu http://www.vidtomp3.com
Pa webhusaiti ino une dzidziso diki, asi zviri nyore sekuisa iyo vhidhiyo yevhidhiyo uye kurodha pasi mp3.
Pindura kuna Octavio Ortega
Hector René Kruger akadaro
Nekuwedzera kweFirefox, Vhidhiyo Dhawunirodha Mubatsiri iwe unogona kurodha pasi uye kushandura mavhidhiyo kuita akasiyana mafomati aripo.
Pindura Hector Rene Kruger
diego avila akadaro
Iri muchitoro, unofanirwa kugadzira account yeUbuntu nekuti iwe unofanirwa kuisa imwe data, asi ichiri yemahara.
Pindura kuna Diego Avila
Ehe, kune zvekare dzimwe nzira dzepamhepo. Imwe sarudzo.
Ehe, ndeimwe yakanaka imwe nzira
Imwe nzira iri kuburikidza newebhusaiti ino, iwe unongonamira iyo URL yevhidhiyo uye kurodha pasi kana yagadzirira sezvo iriyo saiti webhusaiti inoitisa kuishandura
Kana chero munhu achifarira imwe yeiyo terminal:
sudo apt-tora kuisa youtube-dl
Kwaziso munharaunda !!!
Pindura kuna mar10
Zvakaipa zvinondiudza kuti pasuru yacho haigone kuwanikwa, ini ndinoshandisa Linux MInt 13… asi zvirevo zvinotendwa.
Heino peji raunogona kushandura iyo vhidhiyo kuita odhiyo, kwandiri yakanaka kwazvo uye yakavimbika kwazvo .. »Ini ndinosimbisa kuti ndeye mavhidhiyo eYouTube chete uye haakwanise kushandiswa nemamwe mawebhusaiti».
Ini ndinoshandisa Clipgrab uye ini handina matambudziko 🙂
Fernando Merino akadaro
Ndakafarira nzvimbo yekupedzisira paunoshandisa mirairo, unoishandisa sei?
Ndatenda neruzivo. MuFedora hazvishande.
Pindura Fernando Merino
Zvinogona kusashanda nekuti chinyorwa chatove nemakore maviri uye YouTube yakaita shanduko dzinoverengeka kune peji rayo.
satta matka akadaro
Zvinogona kusashanda nekuti chinyorwa chatova nemakore maviri uye YouTube yakaita akati wandei
Pindura kuna satta matka
satta matka kufungidzira akadaro
hey Zvichida hazvishande nekuti chinyorwa chatove nemakore maviri uye Youtube yakaita shanduko dzinoverengeka kune peji rayo.
Pindura kuna satta matka uchifungidzira
Kwandiri zvinodaro (na12.04) kuti «Haikwanise kuwana iyo Youtube-to-mp3 package
Maitiro ekuchimbidza KDE, nyore uye nekukurumidza
Vhara iyo Choqok gap neHotot-QT